National Power News:: कलाकारिता क्षेत्रबाट बाँच्न सकिन्छ ; कमेडिएन कलाकार भगवान खत्री National Power News:: कलाकारिता क्षेत्रबाट बाँच्न सकिन्छ ; कमेडिएन कलाकार भगवान खत्री
कलाकारिता क्षेत्रबाट बाँच्न सकिन्छ ; कमेडिएन कलाकार भगवान खत्री
Monday, February 4, 2019 National Power
माघ , २१ / बनेपा – काभ्रेपलान्चोक जिल्ला जन्मिएर नेपाली कलाकारिता क्षेत्रमा बिस्तारै आफ्नो पाईला सार्दै दर्शकहरुको नजरमा पर्दै गरेका एक कमेडिएन कलाकार हुन् भगवान खत्री ।आज भोलि मेला महोत्सवमा उनको निकै चर्चा हुने गरेको छ ।नयाँ नयाँ ठाउँ गुम्न , अवलोकन गर्ने मन पराउने कमेडिएन खत्री कलाकार बन्ने चाहाना भएर यस क्षेत्रमा लागेको बताउनु हुन्छ । एउटा सफल कलाकार बन्ने धेरै नै मेहनत गरेको र कमेडिएन क्षेत्रमा एउटा छुट्टै पहिचान बनाउनु छ भगवान खत्री भन्नू हुन्छ । प्रस्तुत छ अरबिन्द्र गौतमले नव क्षितिज साप्ताहिका लागि कमेडिएन कलाकार भगवान खत्रीसँग गरेको रमाइलो कुराकानी
आज भोलि म मेला महोत्सव र सुटिङ तिर नै छु। हास्य टेलिश्रीङ्खाला फोकटलालमा अलि ब्यस्त रहेको छु ।
म सानै देखि ठूल ठूला नेता र कलाकार को क्यारिकेचर गर्ने गर्थे र मैले गरेको क्यारिकेचर सबै मन पराउनु भयो अनि यस क्षेत्रमा आउने चाहाना बढदै गयो र अहिले कमेडिएन क्षेत्रमा आएको छु । मलाई कलाकारिता क्षेत्रमा ल्याउन आदरणीय दाई राजेश तिमल्सिनाको ठुलो हात छ म उहाँ लाई सम्झन चाहान्छु ।
० तपाईंलाई अहिले दर्शक श्रोताले कति वटा टेलिसिरियलमा हेर्न पाउछ ?
प्रत्येक हप्ताको शनिबार एनटिभि पल्समा हास्य टेलिशृङ्खला फोकटलालमा देख्न सक्नु हुन्छ र मेरो निर्देशनमा अर्को टेलि चलचित्रको काम हुदै छ चाडै सबै समक्ष आउँछ ।
० कमेडिएन कलाकार बन्नुको कारण ?
मैले ठूला नेता र कलाकारको क्यारिकेचर गर्ने गरेको थिए सबले मन पराउनु भयो अनि म कमेडि क्षेत्रमा नै लागे फल सोरुप आज म मेरो निर्देशमा अर्को हास्य टेलि चलचित्र छ्ड्के सलामको छायांकन धमाधम गरिरहेको छु र यसरी नै कमेडिएन कलाकार भए ।
० कमेडिएन कलाकारले दर्शक श्रोता लाई हसाउन कतिको गर्‍यो छ ?
धेरै नै गर्‍यो छ त्यो त दर्शक श्रोताहरुमा भर पर्ने कुरा हो कोहि हाँसी हाल्नु हुन्छ कोहि कोही लाई हसाउने धेरै गर्‍यो हुन्छ ।
म एकदम सन्तुष्ट नै छु भन्नु पर्छ आफुले रोजेको क्षेत्र भएको कारणले म धेरै खुसी छु ।
सकिन्छ किन नसक्नु आज भोलि बाँच्न गर्‍यो छैन ।
० कमेडिएन कलाकार बन्न कतिको गर्‍यो छ अब आउने कमेडिएन कलाकार लाई के सुझाव दिनु हुन्छ ?
गार्‍हो त धेरै नै छ जुनसुकै क्षेत्रमा काम गर्न गर्‍यो छ कुनै पनि क्षेत्रमा काम गर्न सजिलो हुदैन । म अब आउने कमेडिएन कलाकारहरु लाई सबै कुरा सिकेर बुझेर अगाडी बढनुहोस भन्न चाहान्छु अबस्य पनि एक दिन लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ भन्छु ।
० भविष्यमा गएर कस्तो कलाकार बन्न मन छ ?
० अन्तमा दर्शक श्रोता लाई के भन्न चाहानु हुन्छ ?
हामी कलाकार भनेको भक्त हो , दर्सक भनेको एउटा पबित्र मन्दिर हो जुन हजुरहरुको माया र साथले गर्दा आज यो स्थानमा पुगेको छु अझै हजुरहरुले माया गर्नु हुन्छ भन्ने आशा गरेको छु दर्सकको दुख , पिरलाई मैले गरेको कमेडि बाट आन्न्दित पर्ने पाँउ भन्न चाहान्छु । साथै तपाई लगायत तपाईंको मिडिया लाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो मनको कुरा राख्ने मैका दिनु भएकोमा ।